Nhau - Wongorora mifananidzo yemota dzekare (diki mota) mota modhi yekutenda
Diecast Rori uye Tarakita ine Trailer Model
Plastiki Model Mota
Wongorora mifananidzo yemota diki (diki mota) kukoshesa mhando yemota
Motokari dzekare, dzinozivikanwawo sedzakakurumbira mota, kazhinji dzinoreva Hondo Yenyika Yechipiri isati yatanga kana mota dzekare. Iyo mota yekare chigadzirwa chekushuvira. Iyo mota yakashandiswa nevanhu kare uye vachiri kugona kushanda izvozvi. Iro zita reChirungu imotokari yevintage. 0312 modhi network ine hombe yezvinyorwa nezve mifananidzo yemota dzekare. Nekudaro, nekuda kwekushomeka kwemashoko akakodzera paakaburitswa, haakwanise kuratidzwa rimwe nerimwe parizvino. Tichavagadzirisa nekukurumidza sezvazvinogona.
Sunstar yakavhura Ford modhi coupe
Pfungwa yemotokari yechinyakare yakatanga muna 1973 uye ikaonekwa mune yeBritish magazini inozivikanwa uye yakasarudzika mota. Kunyangwe dudziro yayo chaiyo ichifanirwa kunge iri "yekare yekare mota", nekuda kwesimba rayo anthropomorphic, iro izwi rekuti "mota yechinyakare" rakakurumidza kuwana kuzivikanwa kwevanofarira mota dzemhando yepamusoro uye ndokupararira nekukurumidza, ichiva zita rakabatana remota yekare yevanoda pasi rese. .
Acme Ford Model 1932 Ford Roadster
Nekudaro, kusvika zvino, hapana dudziro yakagamuchirwa yemota dzekare, uye vanyori venhoroondo uye vemota vekare vanofarira kupokana. IAmerican classic mota kirabhu inonyora ayo akasarudzika marangi kana modhi (senge: 1925-1948 kugadzirwa) seyakazara yakasarudzika, iyo inotsanangurwa se "inoshamisa mota, ine yakanakisa dhizaini, yakakwira maitiro maitiro uye kugadzirwa". Iyo inofarira zvigadzirwa zveAmerica, asi zvigadzirwa zveEuropean zvine kuzvidemba kweiyo vicissitudes.
Sun nyeredzi inotanga Ford modhi Tudor bharisamu
Haasi ese ekare mota anokodzera kuve yakasarudzika mota. Kuchengetedza kwakanaka chinhu chakakosha chinodiwa. Mumusika, hapana akawanda mota ane echinyakare dhizaini. Kungofanana nemota zhinji idzo dzakachipa-dzinodhura mana emhuri mota mota, dzinongova nzira dzekufambisa.
Kupatsanura chiyero chemotokari dzekare
Yekare mota kirabhu yeAmerica
Antiques: mota dzese pamberi pa1930
Kugadzira: mota dzese pamberi pa1930
Yakasarudzika: 1930-1948 yakanakisa mota yakanaka
Mukurumbira: 1946-1972 yemhando yepamusoro mota.
Kugadzirwa kushoma: mota "dzinokosha" dzakagadzirwa zvidiki diki mushure meHondo Yenyika II
YeBritish yekare mota kirabhu
Kazhinji kutaura, chikamu chakazara chinotevera:
Pamberi pa1918, mota dzese dzaibatanidzwa pamwe chete dzichinzi maanti, ayo akakamurwa kupinda muna Edward VII uye veteran;
Iyo mota kubva muna1918 kusvika 1931 yaive yekutanga zita rakakurumbira;
Kubva muna 1932 kusvika muna 1945, mota yaive mhando inozivikanwa;
Mushure meHondo Yenyika II, mota dzaimiririra dzairemekedzwa sedzazvino uno.
Mamwe makirabhu muChina
Motokari yekare: 1925 asati asvika;
Yakasarudzika mota: 1926-1941;
Tumira zvehondo zvekare: mushure ma1945.
Kupatsanurwa kweUnited States kunowanzo kutorwa seyakajairwa pasirese. Nekuti United States ndiyo hombe yemotokari Kingdom, iine huwandu hwakawanda hwemotokari dzekare (musika mukuru wemota dzeumbozha muEurope hondo isati yatanga uye yapera iUnited States), uye mushure mehondo, maAmerican nemari yavo yakasimba uye zvinhu. zviwanikwa zvakapotsa kudzima mota dzemhando yepamusoro muEurope.
Kero: Room 201, No.5 Weige Road, Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province